Wasiirka gaashaandhigga DF oo arrin yaab leh ka sheegay ciidamada DFS - Caasimada Online
Home Warar Wasiirka gaashaandhigga DF oo arrin yaab leh ka sheegay ciidamada DFS
Wasiirka gaashaandhigga DF oo arrin yaab leh ka sheegay ciidamada DFS
Muqdisho (Caasimada Online) – Wasiirka Wasaarada Gaashaandhiga Xukumadda Soomaaliya, Maxamed Sheikh Xasan Xaamud oo ka hor hadlayey Ciidamo ka tirsan DFS ayaa sheegay in Ciidamada Soomaaliya ay qaab qabiil u dhisan yihiin.
Maxamed Sh. Xasan ayaa sheegay in Ciidamada Dowladda Federaalka Soomaaliya xiligaan aysan noqon Karin Ciidamo Qaran, Sababtuna ay tahay in Ciidamadu ay Qabiilkii la safteen.
Wasiir Xaamud ayaa Xusay in uu ku Dadaalayo sidii loo soo celin lahaa Ciidamadii Dowladda Soomaaliya oo xili noqday Ciidamada Afrika ugu Caansanaa.
“Ciidamadeenu waxey u dhisanyihiin Qaab Qabiil, Qabiil iyo Qarana isma qabtaan (…) Howl Culus ayaa na hortaala” Ayuu yiri Wasiirka Gaashindhiga.
Sidoo kale Wasiirka Wasaarada Gaashandhiga Xukumadda Soomaaliya ayaa sheegay in uu Shaqada ka tagayo hadii aan lala Shaqeyn islamrkaana aan la dhisin Ciidamada Qaranka Soomaaliya, oo aan Xaquuqdooda la siin.
Xaamud ayaa intaa ku daray in ay jiraan kooxo Burcad ah oo Xirta dariiska Ciidamada Soomaaliya,k uwaas oo doonaya in ay Dilaan Sharafta Ciidamada Soomaaliya.
Dhawaan ayey aheyd markii Wasiirka Gaashaandhiga Soomaaliya uu sheegay in uu Isbadal Muuqda uu ku sameen doono Ciidamada Soomaaliya.